kp3နည်းပညာ၊၄၅၊မိမိရဲ့ဘလော့မှာRead More Functionထည့်ချင်ရင် ~ KP-3 နည်းပညာ
kp3နည်းပညာ၊၄၅၊မိမိရဲ့ဘလော့မှာRead More Functionထည့်ချင်ရင်
Monday, September 07, 2009 KP-3မိသားစု 20 comments
ဒီနေ့အချိန်လေးအနည်းငယ်ရတုန်းကျနော် Code တစ်ခုထပ်တင်လိုက်ပါတယ်၊ ဒီCode ကတော့မိမိဘလော့ post အောက်မှာRead More Functionထည့်နည်းပေါ့နော်၊ ဒါပေမယ့်တချို့ကြတော့BloggerTemplate မှာ Autoရှိပြီးသားပါ၊ မိမိရဲ့ Post ကရှည်နေရင်မလှတော့ဘူး၊ဒါကြောင့်အောက်က Code ကတော့ ဥပမာပြောရင်-ဆက်ဖတ်ရန်ပေါ့နော် မိမိနှစ်သက်သည့် စာသားရေးထည့်နိုင်ပါတယ်
၂။click edit HTML
၃။click edit HTML
<span class='rmlink' style='float:right'><a expr:href='data:post.url'>ဆက်ဖတ်ရန်</a></span>
November 24, 2010 at 1:07 PM Reply
kp3 မိသားစု ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။kp3 အကူညီ လေးနဲ့ဘဲ ကျွန်မ ဘလော့တစ်ခု ပြီးဆုံးသွား ပါပြီ။ အားလုံးပျော်ရွှင် ကြပါစေ။အောင်မြင် ကြပါစေ
November 27, 2010 at 4:55 AM Reply
November 27, 2010 at 9:09 AM Reply
December 24, 2010 at 9:01 AM Reply
မတွေ့ဘူးဆရာ ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲ ကူးညီးပါ
အရင်ကုဒ်ရော နောက်ကုဒ်ပါ ရှာ မတွေ့ပါ။
January 27, 2011 at 11:45 AM Reply
ကုဒ်ကိုရှာမတွေ့သူများ Expand Widget Templates ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။
February 7, 2011 at 5:16 PM Reply
ကုဒ်ကိုတော့ ရှာတွေပီ ကိုကေပီသရီးရေ။ ဒါပေမယ့် ရေးမရဘူးဗျ။ New Postမှာ ရေးတော့ Read more ထည့်ဖို့ ဘာကုဒ် ဘာစာမှ မတွေ့ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ စာတင်ကြည့်တော့ အားလုံးထည့်ပီး Publish လုပ်ပီးမှပဲ Read more ကိုတွေ့တော့တယ်။
February 8, 2011 at 6:00 AM Reply
May 26, 2011 at 3:57 AM Reply
အီးမေးလ်မှာဖတ်ချင်ရင်Google Friend Connect မှာ Sign In ဝင်လိုက်ပါ။သို့မဟုတ်Email Subscription Form မှာအီးမေးလ်လိပ်စာလေးထည့်သွားပါ။ ဆိုတာလေးဘယ်လိုထဲ့တာလဲံသိချင်ပါတယ် ကုဒ်တွေက ဘယ်နေရာမှာ ထည့်ပေးရတာလည်း သေချာ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်
May 27, 2011 at 1:42 AM Reply
အဲဒီပိုစ်နဲ့ကုဒ်တင်ထားတာ၇ှိပါတယ်။labels နာမည် html မှာ၇ှာလိုက်ပါ
July 23, 2011 at 7:50 PM Reply
July 27, 2011 at 8:36 AM Reply
ဧရာဝတီသား။ကျနော်ဒီreadmore function လုပ်နည်း၃ခုလောက်တင်ထားတာရှိပါတယ်။.
မရဘူးဗျာ ကုဒ်ကိုဘယ်လိုမှ ရှာလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကူညီပါဦး E W Tကိုအမှန်ချစ်ပေးလဲမတွေ့ဘူဖြစ်နေလို့
August 31, 2011 at 4:50 AM Reply
read more ကို ကြည့်နေဆဲ တစ်ခြား post တွေ မပျောက်စေပဲ သူ့ တစ်ခုထဲ ထပ်ထွက်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့.... ? Thanks
September 27, 2011 at 6:37 AM Reply
ရတော့ရတယ်လေ ပို့က တစ်ဝက်ကို မချိုးဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီပါခင်ဗျာ
ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို တစ်နေတစ်နေ့ ဒါကိုနှုက်ရတာ ခေါင်းကိုမူးနေတာပဲ
September 27, 2011 at 6:49 AM Reply
ရတော့ရတယ်ဗျ ဒါပေမယ့် ပို့စက တသက်မကျိုးဘူးဖြစ်နေလို့လေ
ကူညီပါဦးဗျာ ကျေးဇူးတင်လျှက် အဖြူရောင်လေး
October 8, 2011 at 2:05 AM Reply
August 2, 2013 at 5:58 AM Reply
thuwai moe says:
October 12, 2013 at 3:27 AM Reply
ဟေးအကိုရှာခိုင်းတဲ့ ကုတ်တွေ့ ဝူးနံပတ်ဘယ်လောက်မှာလဲ